15 | November | 2013 | Burma Muslim
Daily Archives: November 15th, 2013
By burmamuslim on November 15, 2013 | Leaveacomment
MP Aung Hsan, speaking in parliament shortly before he collapsed on Thursday. (DVB)
Burma parliament’s lower house was said to be shocked by the demise ofaUnion Solidarity and Development Party (USDP) representative who collapsed suddenly and died during the legislative session of parliament on Thursday.
Aung Hsan, 66, wasamember of the ruling USDP party and elected asalower house MP for Rangoon’s Pabedan township constituency in the 2010 election.
He had submittedaquestion in the lower house on Thursday regarding security measures and preparations for the upcoming SEA Games in Burma. Deputy Sports Minister Thaung Htike had just replied to the question when Aung Hsan collapsed in his seat, according toafellow lower house member Min Thu.
Burma parliament warns government over unpaid debts
Lower house approves amendments to Electronics Act
A two-minute silence was held for the MP when it was announced that he had died.
Later,aproposal was submitted by MP Myint Thu of Dagon Myothit East constituency suggesting that an ambulance and medics be constantly on call at the parliament building in Naypyidaw.
မြွေပွေးအဆိပ်ကို ခွေးလှေးယားသီးအစေ့က ခြေဖျက်နိုင်ကြောင်း သုတေသနပြုတွေ့ရှိ …
မြွေပွေးအဆိပ်ကို ခွေးလှေးယားသီးအစေ့က ခြေဖျက်နိုင်သည်ဟု သုတေသနပြုတွေ့ရှိထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသုတေသနပြုလေ့လာမှုကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (အောက်မြန် မာပြည်) မှ သုတေသီများက ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေးဦးစွာ ခွေးလှေးယားသီး၏ အနှစ်ရည်အချိုးအဆအမျိုးမျိုးကို မြွေပွေး အဆိပ်နှင့်ပေါင်း စပ်ပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် မွေးမြူထားသည့် ကြွက်ဖြူများ၏အကြောအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းစမ်းသပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အနှစ်ရည် ၀ ဒသမ ၂၁ မီလီဂရမ် သည် မြွေပွေး အဆိပ် ၏သေစေနိုင်သော သတ္တိ အား ချေဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဖန် ခွေးလှေးယားသီး အနှစ်ရည်ကို တစ်ပတ် လျင်တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် သုံးကြိမ် ထိုးထားသော ယုန်များ၏သွေးရည်ကြည် ၁၀၀ မိုက်ခရို လီတာ သည်လည်း မြွေပွေးအဆိပ်၏ သေစေနိုင်သော သတ္တိကို ခြေဖျက်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး ကြွက်ဖြူများ တွင် စမ်းသပ်ချက်အရ တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ဂျီးယီးယားနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသတစ်ချို့တွင် မြွေကိုက်လူနာများကို ခွေးလှေးယားသီးသုံးစွဲ၍ ဆေးမြီးတိုအဖြစ် ကုသသုံးစွဲခြင်းများကို ပြည်တွင်း သုတေသီများ က ခွေးလှေး ယား သီး မှ စနစ်တကျလေ့လာသုတေသနပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ခွေးလှေးယားသီးအစေ့အနှစ်ရည်နှင့် ၄င်းအနှစ်ရည်ထိုးသွင်း ထားသော ယုန်၏သွေး ရည်ကြည် တို့သည် မြွေပွေး၏သေစေနိုင်သော အဆိပ်သတ္တိအပေါ် ခြေဖျက်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သုတေသနပြုကာ အခိုင်အမာ သက်သေပြ ဆိုနိုင် ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
OIC လာတာကို ကန့်ကွက်ကြတယ်၊ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်မ်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒုက္ခပေးနေတာ ပိုပြိးသိသွားတယ်။
OIC လာတာကို ကန့်ကွက်ကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဒါက အခု မွတ်စလင်မ် ကမ္ဘာက ပိုသိသွားတာက ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်မ်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အကြမ်း ဖက်သမားတွေ ဘယ်လောက် ဒုက္ခပေးလဲဆိုတာ ပိုပြီး နားလည်စေတဲ့ အရာပါ။ ဒီတစ်ခါ OIC ကို အစိုးရက ဖိတ်ခေါ်တာပါ၊ ဒါပေမဲ့ အစိုးရကဘဲ OIC ကို ရိုင်းဆိုင်းတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင်စေပြီး ဆန္ဒပြခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒါတွေက မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သူတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င်က ဒါကို ကြည့်နေတယ်ဆိုတာက OIC ကို လူလို့မထင်တဲ့ သဘောဖြစ်ပြီး~~မြန်မာပြည်ထဲက မွတ်စလင်မ်တွေကို သတ်ဖြတ်စော်ကားနေတာရော၊ ဘာသာတရားကို စော် ကားနေ တာရော အခုတစ်ခါ ကမ္ဘာ့ မွတ်စလင်မ်ထုကို စော်ကားနေတာ သက်ရောက်နေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ မွတ်စလင်မ်တွေနဲ့ ပြသနာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြ တဲ့ ဗုဒဘာသာဝင်တွေ မွတ် စလင်မ်တွေ အဲလောက်ဆိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့တွေ ထမင်းငတ်သေမှာသေချာတယ်။ ခင်ဗျားတို့ လူတွေ မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်နေတာကို ကြည့်ကြပါ၊ ကျန်တဲ့ မွတ်စ လင်မ်နိုင်ငံတွေမှာ အစေခံလုပ်နေကြတာကို ကြည့်ကြပါ။ တစ်ချို့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ပြသနာဖြစ်နေတာတောင် ဘာသာတရားကို အခုလိုစော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး..အခုဟာက မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေ အားပေးအားမြောက်လုပ်ကာ OIC လာတဲ့ အချိန် ဘာသာတရားကို အခုလို စော်ကားဖို့ အခွင့် အရေးပေး တာကို က မြန်မာနိုင်ငံဟာ အစ္စလာမ် ကမ္ဘာကို စိန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ တူပါတယ်။
OIC ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ မျက်ရည်တွေ သက္ကေပြင် ဗလီမှာတော်တော်ကျခဲ့တယ်
အိုအိုင်စီ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ မျက်ရည်တွေ သက္ကေပြင် ဗလီမှာတော်တော်ကျခဲ့ပါတယ် ဆိုတာ ဒီနေ့ သိလိုက်ရတယ်။ စစ်တွေ သက္ကေပြင် ဗလီမှာ ~~ OIC ကိုယ်စားလှယ်တွေ မောင်တောကနေ ပြန်လာပြီး ဂျူမာဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေကို ဖက်ပြီး ငိုကာ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ဒုက္ခရောက်နေတာကို လာကြည့်တာပါဆိုပြီး ရောက်ရှိလာကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်အားလုံးရဲ့ မျက်ရည် ကျခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေရော ရိုဟင်ဂျာတွေရော တော်တော် ငိုခဲ့ရတယ်ပြောတယ်။
စစ်တွေမြို့ သက္ကေပြင် ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်ရှိခဲ့သည့် OIC ကိုယ်စားလှယ်များ
မြန်မာ့မီးရထားသည် ပြည်သူလူထုအား ၀န်ဆောင်မှု အပြည့်အ၀ပေးနိုင်ရေး ကြိုပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်မြို့ပတ်နှင့်ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်းတွင် ရထားကြီး ၁၄ ဆိုင်း၊ RBE ၇ဆိုင်း စုစုပေါင်း ၂၁ ဆိုင်း ဖြင့် နေ့စဉ်ခေါက်ရေ ၂၀၀ ပြေးဆွဲလျက်ရှိပြီး လက်မှတ်ခအဖြစ် ပြည်တွင်းခရီးသည်တစ်ဦးလျင် ၁၀၀ ကျပ် (ခရီးစဉ် ၂ ခုအသုံးပြုနိုင်)နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးလျင် ၁ ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ခရီးသည်များသက်တောင့် သက်သာစီးနင်းနိုင်ရန်ပန်ကာများ တပ်ဆင်ထားသောအထူးတွဲ ၁ တွဲစီကို ရထားကြီး ၁၄ဆိုင်းတွင်ချိတ်ဆက် ခဲ့ပြီးလက်မှတ်ခမှာပြည်တွင်းခရီးသည်တစ်ဦးလျင်၂၀၀ ကျပ် (ခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းအတွက်သာ)နှင့်နိုင်ငံခြား သားတစ်ဦးလျှင် ၁ ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါသည်။
ခရီးသည်များပိုမိုအဆင်ပြေစွာဖြင့်အဆင့်အတန်းမီမီစီးနင်းနိုင်ရေးအတွက် RBE Air Con အဆင့်မြင့် ရထားကို ၅ – ၁၀ – ၂၀၁၃ရက်မှ စ၍စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပြီးမြို့ပတ်ဘူတာ ၁၃ ဘူတာတွင်ရပ်တန့်၍ နေ့စဉ် ၈ ခေါက် ပြေးဆွဲခဲ့ရာခရီးသည်စီးနင်းမှုများတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ လက်မှတ်ခမှာ ပြည်တွင်းခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် ၄၀၀ ကျပ်(ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက်)နှင့်နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တစ်ဦင်္းလျှင် ၂ ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါသည်။ Air Con ရထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့ မီးရထားဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး ဘူတာများတိုးမြှင့် ရပ်တန့်ပေးပါ ရန်တောင်းဆိုလာပါသဖြင့် အဓိကကျသည့် လှည်းတန်းဘူတာတွင် ၈ – ၁၁ – ၂၀၁၃ရက်နေ့မှစ၍ တိုးမြှင့်ရပ် တန့်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ုကုန်မြို့ပတ်နှင့်ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်းတွင် ပြေးဆွဲအသုံးပြုနေသော လူစီးတွဲများမှာသက်တမ်း ကြာမြင့် နေပြီဖြစ်၍ ခေတ်မီသစ်လွင်သော လူစီးတွဲ ၆ တွဲပါမြို့ပတ်တွဲဆိုင်းအသစ်ကိုလူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်) ၌ တည်ဆောက်၍ ရန်ကုန်မြို့ပတ်နှင့်ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်း တွင်ပြေးဆွဲနေသေဲာဲ ဇဲ တွဲဆိုင်းနေရာတွင် အစားထိုး လျက် မူလခရီးစဉ်အတိုင်း၁ – ၁၁ – ၂၀၁၃ရက်နေ့မှစတင်ပြေးဆွဲလျက် ရှိရာလက်မှတ်ခအဖြစ်ခရီးစဉ်တစ်ခုအ တွက်နိုင်ငံသားတစ်ဦးလျှင် ၃၀၀ ကျပ်နှင့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး ၁ ဒေါ်လာကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းတွဲဆိုင်း အသစ်တွင် ဖိုင်ဘာခုံများ၊ စတီးလက်ကိုင်တန်းများ၊ ပန်ကာများ၊ မီးများပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ထားသည်။
၀န်ဆောင်မှုအနေဖြင့် RBE Air Con အဆင့်မြင့်တွဲဆိုင်းတွင်တွဲထိန်း ၃ ဦး၊လက်မှတ်စစ် ၂ ဦး၊ရထား လိုက်လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးပါရှိပြီဲးဲ ဇဲအထူးတွဲဆိုင်း (၃၀၀ကျပ်တန်လက်မှတ်)တွင် တွဲထိန်း ၃ ဦး၊လက် မှတ်စစ် ၄ ဦး၊လက်မှတ်သိမ်း ၂ ဦး၊ရထားလိုက်လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ဦးနှင့်ကျန်တွဲဆိုင်း ၂၁ ဆိုင်းတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးစီမှ ခရီးစဉ် စ /ဆုံးလိုက်ပါတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ရုံးတက်/ရုံးဆင်းချိန်များတွင် ခရီးသည်များ အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရေး အတွက်ဝန်ကျယ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုနံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ ၊ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီ အတွင်းတင်ဆောင်ခွင့်မပြုဘဲ ကျန်အချိန်များတွင် ခရီးသည်နှင့်အတူပါရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကိုရထားနောက်ဆုံး တွဲတွင် တန်ဆာပြုလုပ်တင်ဆောင်စေခြင်းကို ၁ – ၁၀ – ၂၀၁၃ရက်နေ့မှစ၍ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ ၇ – ၁ – ၂၀၁၃ ရက်နေ့ The Dairy Eleven Newspaper သတင်းစာ၏ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍနှင့် ပြည်သူ့ အသံဆောင်းပါးတွင်ခရီး သည်များ၏ မြို့ပတ်ရထား အဆင့်မြှင့်တင်ထားမှုအား RBE Air Con အဆင့်မြှင့်ရထားနှင့်ဲ ဇဲ တွဲဆိုင်းတွင် အစားထိုးပြေးဆွဲသည့် လက်မှတ်ခ ၃၀၀ကျပ် ကျသင့်သည့် အထူးရထားတွဲဆိုင်းအား ကွဲပြားစွာ သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့မီးရထားသည် ခရီးစဉ် ၂ ခုအသုံးပြုနိုင်သော ၁၀၀ကျပ်တန်လက်မှတ်၊ခရီးစဉ်တစ်ခုသာအသုံးပြုနိုင် သော ၂၀၀ ကျပ်တန်(အထူးတွဲ)လက်မှတ်၊၃၀၀ကျပ်တန်ဲ ဇဲအထူးတွဲလက်မှတ်နှင့် ၄၀၀ ကျပ်တန် RBE Air Con အဆင့်မြင့်ရထား လက်မှတ်များ ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည် ဖြစ်ရာလက်လုပ်စားခရီးသည်များမှသည် လူလတ် တန်းစားခရီးသည်များအထိ အားလုံးအသုံးပြုနိုင်ရေး စီစဉ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးမိမိတို့နှစ်သက်ရာ ရထားများစီးနင်း၍ခရီးသွားလာနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။